Guddoomiye Muuse Biixi Geyigu Ma Ka Maarmayaa?: Gorfaynta Hees Loo Qaaday Murashaxa KULMIYE! | Somaliland Today
← Peace is the sign of development and prosperity
.By Hussein Haji Ahmed →
Guddoomiye Muuse Biixi Geyigu Ma Ka Maarmayaa?: Gorfaynta Hees Loo Qaaday Murashaxa KULMIYE!
Maalmihii ololaha ayay xafiisyo dhawr ah oo KULMIYE ku leeyahay magaalada Hargeysa duulduul ahaan igaga soo gaadhay hees loo qaaday Guddoomiyaha ahna Murashaxa xisbiga talada haya Md Muuse Biixi Cabdi. Ereyada ugu caansani waxa ay ahaayeen “Guddoomiye Muuse Biixi Geyigu ma ka maarmayaa?”.
Si aan uga bogto waxa aan galay barta baaxadda balladhka iyo ballaca leh ee Youtube, kaddibna waxa ii soo baxay nuxur ka duwan kii aan moodayay in ay suugaan ahaan ku qotonto heestaasi. Waxay noqotay tix guraangur ah oo laga minguuriyay godad kala geddisan. Iyada oo aan la tifaf-tirin ayaa fagaare laga tiriyay. Shaw dadkuna muusigga ayuun bay dhegaysanayeen. God-maanseedyadii Baarcaddaha, Waraabka iyo Maqasha ayaa la isku dhafay, markaasaa lagu dhawaaqay.
Walaw uu Muuse Biixi Cabdi yahay tartamaha ugu aqoonta badan suugaanta iyo dhaqanka isla markaana uu nolol miyi iyo mid magaalaba arkay isla markaana uu la jaal yahay abwaanno waaweyn oo Hadraawi, Marxuun Gaarriye iyo Xasan-Ganey ka mid yihiin waxa aan filayaa in la caammeeyay. Ku darso’ oo maalintii kowaad ee aan ballaan gaar ah kula kulmo Muuse Biixi Cabdi waxa aan xafiiska KULMIYE ugu tegay isaga oo akhrisanaya gabay laga curiyay halganka SNM. Haa, halkaa kulannada ii yara dib-dhiga.
Haddii aynu u soo laabanno heestan laga unkay god-maanseedyada la isku cayn iyo bayd jaray, ka ugu horreeya ee ay ku fadhido ama Baarcadduhu waa kii ahaa
Ma gudin baa lagu sarjaray
Shaluu Cadantii ka yimi
Shan naagood buu wataa
Shantuba shaahay cabbaan
Ma Boosaasaad katimi
Ma soo badi baad is tidhi
Ma boodhkay kugu qaseen
Jacayl lama moosi karo
Siduu mayayguu da’aa
Mirood buu kugu dilaa
Naf go’day iyo roob galbeed
Heestu Baarcaddehaas oo deegaannada qaarna Saar looga yaqaanno, meelana Baloolley laga yidhaadho ayay ku bilaabmaysaa. Waxay tidhi:
Guddoonshaha haybadda leh
Wakaa bari iyo galbeed
Shacbigu garab joogsadee
Gacmaa la is wada qabsaday
Haddii ay shantaasi baarcadde ahaayeen, waxa loo gudbay godkii maqasha.
Ma laguu warramay?
Waa maalin dhaw
Oo ay midi dhashaa
Midna dhaqayo tahay
Waan boodi jiray
Waan badhi caddaa
Hadba waxan arkaa
Anoo ay cidla’a ah
Waar dee maxaad iiga eegaysaan, keena tusaaleyaal kale? Meerisyada heesta Muuse Biixi ee godka maqashu waa kuwan:
Guushu waa KULMIYE
Waa geesi qaran
Godkii Waraabka ayaa haddana loo gudbay.
Shifo ku af-saar
Oo shar kuuma leh
Waa na kiciyoo
Waa wax nagu kulul
Adoo gubad galay
Goodir kugu sheeg
Oo ku garan-waa
Meel la waayee
Markay maqan tahay
Iyada oo waraabka lagu maaweelinayo isla markaana la isku sidkay tuducyadii maqasha iyo waraabka ayaa la yidhi:
Waa geesi qaran (godkii maqasha)
Oo xil gudan kara (waraabka)
Runta kama gabbado
Beenna uma gar-lulo
Galdoolo ma leh
Gar Allee bulshoy
Ma gudboon yihiin?
Guddoon jilicsan oo
Lagu soo gabbado
Qaran kuma galee
Meerisyadii Baarcaddaha iyo Waraabka oo madaxa la isu geliyay ayaa haddana lagu yidhi:
Geyigu ma ka maarmayaa “Maya, maya”
Waxa lagu gunaanadayaa godkii waraabka oo maraqiisa la cabbay. Gunaanadkuna wuxuu ahaa:
Waa nin garasho leh
Oo garaad badan
Oo geyiga jecel
Oo go’aan adag
Aar bal jooga waan illaawi gaadhaye, intan halhayska iyo dhextaalka ahayad ayay hobolladu heesta ku af-meereen.
Haa, Xafiiska Wacyigelinta u qaabbilsan KULMIYE ayaa eedda leh. Haddii la baandhayn waayana, qaar buuri tufaya ayaa lagu sheegi kuwo Murashaxa bogaadinaya.. Hawraartu geeso iyo girgirro badanaa? Ma ereyadii Maxamuud Xaashi Cabdi baa? Ma laxankii Cismaan Cabdillaahi Saxardiid (Caddaani) baa? Ma muusiggii Cabdillaahi Maxamed Daahir (Cukuse) tumay baa? Ma habayntii iyo soo-saaridii Maxamed Ibraahin (Qabo) ku fara-yaraystaybaa